ZARIDAINA ANOSY : Notolorana tamin’ny fomba ofisialy | déliremadagascar
ZARIDAINA ANOSY : Notolorana tamin’ny fomba ofisialy
Socio-eco	 7 mars 2018 lynda
Androany 07 martsa 2018, nandeha nijery ifotony ny zaridaina eny Anosy sy Mahamasina ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Nanaraka azy teny ny mpikambana ao amin’ny governemanta vitsivitsy sy ireo olom-panjakana. Ho fanatsarana ny endriky ny tanana an’Antananarivo renivohitra, nohavaozina, nohatsaraina ary nampiana io zaridaina io. Ny Ministera eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena,ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana (M2PATE ) no nandray an-tanana ny famitana ny asa. Toromarika nomen’ny filoham-pirenena ny hanatsarana manodidina an’ny biraom-panjakana ka izao tanteraka izao.
Tamin’ny volana novambra 2017, ny ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana no nanajary ny zaridaina teo Anosy ka nametraka foto-drafitra asa ahafahan’ny ankizy milalao. Ny M2PATE kosa no nanohy ny fanatsarana ny manodidina ny farihin’Anosy. Toeram-pilalaovan’ny ankizy, toerana filalaovana tsipy kanetibe, “skate board” hita eny amin’ny zaridaina Anosy. Nohatsaraina ihany koa lalana mankeny amin’ny “anjely mainty” sy ny zaridaina telo ao Mahamasina.